स्टाइलिश बुना भयो टोपी
फैशन फैशन समाचार
चिसो सिजनको शुरुआतको साथ, हामी स्टाइलिश हेडका सही छनौटको बारेमा सोच्न थाले। आखिर, चिसो बावजुद, हामी सधैं राम्रो हेर्न चाहन्छौं।
महिलाहरूको लागि स्टाइलिश बुने टोपीहरूमा ध्यान दिनुहोस्। तिनीहरू केवल समयमै परिवर्तन गर्दछन्, वर्षैदेखि नै धेरै लोकप्रिय छन्।
विशेषतया लोकप्रिय यो सिजन एक ओभरहांगिङ किनाराको साथ ठूलो झिंगाको बुना भयो बकेट हो। र रंगहरू उज्यालो विविध हुन सक्छन्, उज्ज्वल देखि कम-कुञ्जीबाट। तपाईं यसलाई एक ब्रोच संग सजावट गर्न सक्नुहुन्छ, वा उपकरणहरू, फर सम्मिलितहरू, कढाईहरूसँग मोडेलहरू छनौट गर्नुहोस्।
स्टाइलिश बुना भयो टोपीको मोडेल
यस मौसममा धेरै लोकप्रियहरू स्टाइलिश बुनिएको ठूलो स्तनपानका महिला टोपहरू हुन्। यसबाहेक, ठूलो ठूलो छ, अझ फैशनेबल यो हो। यस्तो हेड्रेसमा , फैशनेबल फैशनेबल mittens , दस्ताने र स्वरमा स्कार्फ छनौट गर्नुहोस्।
पनि मांग मा महिलाहरुको लागि राम्रो मिलन (बिना या बिना गहना) को स्टाइलिश टोपियां हो। स्क्यान्याण्ड्वेनियाई मनसायमा आफ्नो छनोट रोक्नुहोस्, र तपाइँ हराउनु हुनेछैन। एउटै ढाँचाको साथ, एक स्वाद छनौट गर्नुहोस्।
फैशनमा टोपका धेरै मौलिक मोडेलहरू - "टोपी-स्टोजिङ" र "क्याप-पैर"। उनीहरूको टोनमा एक-रङ रङ छनौट गर्न सिफारिश गरिन्छ।
हेड्रेको 80 मोडेलबाट राम्रो देखिन्छ जस्तो लाग्छ - "टोप-ट्रम्पट।" यो एक साथ2प्रकार्य - टोपी र स्कार्फ।
एक बुना भयो टोपी कसरी छान्नु हुन्छ?
एक स्टाइलिश बुना भयो महिला टोपी एक फैशनेबल शैली को हुनु पर्छ र रङ संग आफ्नो बाहर को कपडे संग राम्रो तरिकाले।
टोपी को रंग कोट या जैकेट को रंग को रूप मा एक समान हुनु पर्छ, बरु विपरीत, यो विपरित रंगहरु को देखने को लागि बेहतर छ। यो वांछनीय छ कि टोपी को रंग र आभूषण स्कार्फ को छाया संग मेल खाएको छ। यदि तपाइँ एक ज्वालामुखी र नरम स्फिफर छान्नुहुन्छ भने, तपाईंको छवि निश्चित रूपमा स्टाइलिश र साम्राज्य हुनेछ, र यो आरामदायक रमाइलो संग ठण्डमा तातो हुनेछ।
नयाँ फैशन वसन्त-गर्मी 2014
युवाहरु फैशन 2014
स्टाइलिश महिला बालबालिका 2014
आरामदायक पोशाक 2016
नयाँ कर्टकट 2015
सफारी 2013 को शैलीमा ड्रेस गर्नुहोस्
आँखाहरु - फैशन 2015
महिलाहरु को फैशन शर्ट्स
नीलो कपडाको लागि मैनीक्योर
पतलूनले 2015 फारे
मेकअप Dior 2013 को ग्रीष्म संग्रह
फैलाउने टोपी 2014
नाखूनहरूको डिजाइन - नयाँ वस्तुहरू 2016
आन्तरिक मा रङ मिल्दो
इन्जेन्ड कील - उपचारको सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका
माछा ओवनमा पकाइएको
प्रिंस जर्ज कम्पनी विन्ना पोह रचना गरे
भान्सामा सबैभन्दा उत्तम तल्ला के हो?
धुलाई पछि तल जैकेट कसरी सुत्नु हुन्छ?
गर्मीमा कत्तिको स्टाइलिश गर्ने?
म्यांमार - आकर्षण
आहार "1200 क्यालोरी"
सुन्तला र नींबू संग कद्दिन जाम
वजन गुमाउँदा स्तन कसरी राख्ने?
मंग बीन कसरी बढ्नुहुन्छ?
कुन सम्पर्क लेंस मैले चयन गर्नुपर्छ?
रक्ला र टमाटरहरू संग सलाद
तहखाने साइडिंग - आधुनिक प्रकार को पिरोया ट्रिम, स्थापना सुविधाहरु
विवाह पछि विवाह
फैशनेबल नेल डिजाइन 2014
कस्टोर तेलको लागि कपाल - सबै प्रकारको कपालको लागि प्रयोग गर्ने उत्तम तरिका